Wholesale Super Yakajeka Zirconia Disc 98mm Multi-layer Zirconia Block yeDental Crown Material Inoenderana Open Open CAD CAM Mugadziri uye Mutengesi | Yurucheng
Inoenderana system uye inowanika saizi SHT multiplayer zirconia block:
Yucera vane yakaoma maitiro kudzora manejimendi kuverengera yakakwira qulity chigadzirwa. Tine nekukurumidza kupindura iwe mhinduro. Kana zvichidikanwa, tichaenda kunzvimbo yako. Tichaedza zvatinogona kuti tikupei mhando yepamusoro chigadzirwa uye rugare rwepfungwa. Mutsara weUgent: + 8818018734694 (whatsapp)
1.T / T, West Union, Paypal, L / C uye nezvimwe (kuendesa muripo kubhadharisa kumutengi)
3.Discount Policy: Isu tinopa dhisikaundi yehuwandu hwehuwandu.
4.OEM Policy: Tinogona kugamuchira OEM odha.
A: Tichaita kotesheni mushure mekutitumira yako yekutenga chirongwa (inosanganisira zita rezvigadzirwa, modhi uye huwandu). Kana iwe uchibvumirana nekota, ndapota titumire zita rekambani yako, kero uye nhare yekutakura zvinhu. Tichaita proforma invoice uye tinokuzivisa iwe nzira yekubhadhara. Midziyo yekuendesa zvinhu ichave zvakare kuziviswa zvinoenderana neangly.
Q6. Ndeapi mazwi ako emutengo?
A: Mutengo wedu ndeyeEXW CIF & mutengo weFOB, tinogamuchirwa kuti utitane nesu zvakananga neemail, whatsapp.
Mubvunzo 7. Ndeipi nguva yekuendesa?
A: 5 -7anoshanda mazuva nekutaura.
Kana iwe uine dambudziko mukushandisa, iwe unogona kutsanangura dambudziko dambudziko, isu tinobvunza nyanzvi kuti ipe mhinduro yako. Mahara eparutivi zvikamu zvinogona kupihwa kana zvichidikanwa.
Pashure: YUCERA wemazino zvinhu mugadziri mari economical mazino lab zirconia mabhuroko
Zvadaro: Yucera mazino ST zirconia block yeiyo cad / cam system / mazino zirconium yeCAD murabhoritari
Mutengo weCerec Zirconia Mabhokisi
Mazino Zirconia Block Mugadziri
Zirconia Inodzivirira Mazino
Zirconia hwokugaya hwakabvira Block